Wadan aan Jirin.
Posted to the Web 22: 33 GMT December 10, 2001
Dhamaan dad ka somaliyeed:
Waxaan ahay nin somali ah oo mudo 20 sano ah yurub kunool.
Waagii hore ee ay dowladkusheek ay jirtay waxaan is dhihijiray dalbaad leeday.
waxaa ii cadaatay in madaxdii hare ay wadaniyaal ahayeen.
inkastoo maamulkooduxumaa hadana dadcun mahayne dalcunbay ahaayeen, Waxaan hada ogaaday in aan qof somali ah oowadani ah uu san jirin.
ama og waxa wadaninimo aytahay,markhatina waxaa ka ah waxa (Muuqadisho ka dhacay ilaa iyo hadana ka jirta unamalaymayo in ay rajo yeelandonto).
Wayo tanaba kadartay,oo dad aan la aqoon baa soobaxay, aad u malayso in ay gaajo hilib dadeed ahi ayhayso.
Waxaan aad iyo aad ugaxumahay dad: isumaleeya in ay Muslimyihiin, oo aan aqoon diin ( aanan dhihikaro diin mahaystaan).(Kufaartan kaxun).Waayo waxa ay kufaarta ku sheegaan ayaa caruurtiina iyo duqeeshinkaba iyo idinkaba idin caawiya, Wadamada Muslinka ahna way siku kiin diraan oo lacagta idinkay idinsiiyaan si aad wax u xukuntaan???..?.
Ala yaa xoolaha wadanka udhiiba iyagaa idindhama,oo idinka wadanisan, idinkana muslinsaan.
Dad isumaleeya in ay wax xukumikraan oo aan aqoon waxa xukunku uu yahay.
U malayn maayo waqtigan iyo mudo dhowba in qof waxgarad somali ah in uu dariiq kumarayo sidii lagu sookoriyay iyo islawaynidii somalinimada iyo wadan Somalia la yiraahdo ayaan ka imid is ku dhihikraa majiro.
Nasiib darada ugu wayni waa Calooshood laciyarayaal aan ogayn waxa masuliyadu tahay iyo qiimaha qofka bini aadmiga ahi uuleeyahay, wayo isagaan qiimalahay oo calooshiisa uun ka fikiri, ama dad cun ama waxkalecun waa in uu wax cunaa taas ayaa u daran isaga, waana masuul e day?..
Waxaan layaabanahay dadka siyaasiyiinta waaween isku sheegi ee wali lashaqaynaya dabana socda caruur yaryar oo xoolo cawshelay aan ka duwanayn oo lacag yar heshay dabsocda.
Anigu waxaan dhihi lahaa Bal hort Qabiil kasta meeshiisa ha dhisto oo maamul ha samaystaan.waayo tan soomaliya ka dhacday wali looma soo baraarugin, laakiin waxaa dhici waqti la is xisaabin ama akharo ha noqoto ama Aduunkaba laakiin waydhici waana la is xisaabin, hadaad moday in aan qofna ku ogayn,adaa is ku markhatifuray in aad xoolaha kalidatid.
Mida ugu muhiimsan oo qofka biniaadmigaah laguyaqaan is fikirka.
Marka hadaad fikirtaan maxaad u malayn in qof kale ama wadan kale uu dhulkaaga kuu dhisi sidaad rabtid, tani waa igu qalad laakiin xoolahaba waa lala hadlikraa oo wax way maqlaan ee dad xoolokaliita sideed yeeli ilaah baa yaqaan meeshuugayn.
Meesha ugu liidata oo xoolaha ugu xumiku noolyihiin waa xamar iyo Caruurta kaladuwan ee ayda galadukorsato is mooday ee kalaqaybqaybsaday,isna dili is dhici,taasna waxa kusookoriyay abayashood,waxayna modaan in ay dadnoolyihiin laakiin waa ayrabiyoqabta.
haduu qofmuslin ahi uu jiro joogana uuna rabo in uu Janatago marhoruu wad dililahaa.ama qofdamiirleh oo ka gubanaya waxa ay kusamaynayaa matida iyo duqooshinka iyo wadankaba,taasina waxay ina tusi in Somaalia aynan muslin lahayn.
Waxaan ilaah idiinka baryayaa, in uu dad idinka dhigo, ama xoolaha uu caqli idiinsiiyo.
Waayo xoolahaa idinka wadanisan.
Ilahay wadanka ha hagaajiyo waxa dhibayana ha dhibo.
Masaakiintana kor hageeyo. waayo iyagaa muslin dhabah.
Waxa xukunka kudirirayaa waa wuxuush aan xalaal lagu dhalin markii horaba.
waligoodna xalaal manoqonayaa, dhinac kutuugsada wadmada aan rabin in uu wadankiinu Midoobo,dhinaca kalena masaakiinta kulaaya waxaad sootuugsateen, ood wadnka nabadgalyadiisa ku gadateen.
Nabad galyo iyo Dad wanaagsan.
You my can contact with this e-mail if you like.
Thanks for all good somali peaple.